Ny Loza Mitatao Raha Mihevitra Hetsika Miaramila Hamelezana An’i Korea Avaratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2017 8:00 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Português, Magyar, Español, Français, English, English
Singany amin'ilay Mansudae Grand Monument ao Pyongyang, Korea Avaratra. Sary an'i Stefan Krakowski tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
Ireo $20 tapitrisa lanintsika isanandro hikojakojàna ny fitaovana nokleary amerikàna dia ahafahana manome $1,000 isanandro tsirairay ho an'ireo ankizy roa alina matin'ny hanoanana. – J. Philip Newell (Firindràna Vaovao)
Manoloana ny mety hisian'ny ady nokleary ao Azia Atsinanana, manoloana ny ho fahafatesan'izy ireo alohan'ny fotoana, noho ny ataon'ireo olondoza sy filoha tsy mahita akory ny eny an-tanim-paharavàna, dia mazàna aho no manontany tena ny amin'izay mety ho tenin'ireo olontsotra trotraka ao anatin'ireo fampielezankevitra tsy misy fo miantra miantso ady maoderina amin'izao fotoana izao.
Betsaka loatra ireo aina nafoy nateraky ny baomba mahazatra, ny fitaovam-piadiana atomika ary tato anatin'ny taona vitsivitsy dia ny drona. Mba namadibadika ny ati-fanahiny ve ireo mpitarika voafidy tamin'ny fomba demaokratika ary tonga hatramin'ny fankatoavana ny tena zavatra nitranga tao Hiroshima sy Nagasaki? Lasa nataon'ny teknolojia tsy hijery izay maha-olona sy faran'izay mahatsiravina ny ady, saingy toa mba hita ihany hoe ho takalon'ireo teknolojia farany momba ny ady sy ny fitaovam-piadiana mahavono marobe dia maniry ny hanilika ireo fotokevitra ambony nijoroany ireo mpitarika firenena.
Ao anatin'ny fifanolanana amin'izao fotoana izao amin'i Korea Avaratra, ny hevitra tena masaka an-dohan'ny governemanta amerikàna dia ny hamantatra raha toa ka mety hanohintohina ny firenena amerikàna ny fanafihana atao amin'i Korea Avaratra. Raha resaka ambony latabatra dia tokony hiaro an'i Korea Atsimo sy Japàna mpiaradia aminy i Etazonia. Kanefa, raha tena miasa loha marina momba ny fitonian'ireo mpiaradia aminy ny manampahefana, tena faran'izay manahirana ny fihantsiana mpanao didy jadona iray efa very fanahy mbola velona izay efa nilaza ampahibemaso fa mihevitra ny handefa balafomanga hamely an'i Korea Atsimo sy Japàna, izy roa ireo izay samy manana toerana saropady amin'ny fomba fijery stratejika sy ny maha-olona.
Tsy tapaka ampahafantarin'ny tafika amerikàna ny mety ho faharavàna aterak'ireo fitaovam-piadiany famakiana “bunkers”, izay ny tena tanjona dia ny “hanapahana” ny lohan'ny fitondràna ao Korea Avaratra. Lazain'ireo manampahaizana ara-tafika fa balafomanga Tomahawk miisa 300 dia ampy handemena ny tafik'i Korea Avaratra, saingy io tsy miantoka ny ho fahapotehana tanterak'ireo balafomanga rehetra sy fitaovam-piadiana nokleary misy, raha toa izy ireny ka miaraka alefa avy any aminà tobim-pamaharana miafina, na fitovana mifindrafindra sy sambo nokleary mpisitrika an-dranomasina.
Toy ny noterena hanana fisainana miaina fahirano ny fitondràna ao Pyongyang — tahotra raikitampisaka hoe hampiasa ireo fitovampiadiana mahazatra ry zareo ao Etazonia mba hamongorana azy ireo amin'ny fotoana rehetra. Toa maneso anefa, fa raharaha mampikorotan-tsaina no iainan'izao tontolo izao ankehitriny hoe na ny mpitantana ao Etazonia amin'izao fotoana izao aza dia tratry ny vela-pandrika ara-tsaina toy izay ihany koa. Raha ny ao Pyongyang manosika hatrany ny firosoany mankany amin'ny fanapariahana ireo ICBMs mitondra loha nokleary, ny fitantanan'i Trump indray mety manao famintinana hoe ny hany azony atao dia ny manafika avy hatrany, na eo aza ny mety ho fahavoazana tsy iriana aterak'izany amin'ireo mpiaradia aminy.
Tena manelingelina ny hoe filoha, praiminisitra ary mpanao jadona tahaka izany no manana fahefana hampirefotra fitaovam-piadiana mahavono marobe. Tsy voakina amin'ny fomba ofisialy ny maha-olompirenena ireny hery ara-tafika ireny na manome azy ireo io fahefana io amin'ny alàlan'ny fitsapankevitra na fomba hafa demaokratika. Rehefa manao jery todika mankany amin'ilay tetikasa Manhattan ny olona, lasa miharihary sy mangirifiry ny fomban'i Jeneraly Groves, talen'ilay tetikasa, nandreseny lahatra ny filoha Truman hanome alàlana ny fandatsahana ireo baomba atomika.
Tanatin'ireo taompolo nanaraka taty aoriana, fanamarinana vitsy no napetraka teny anivon'ny fibaikoana mba hanakanana ireo filoha tsy hoentanin'ny fihetsehampo sy tsy hanaotao foana noho ny halozàny na ny tahotra ananany. Raha tsorina, na i Trump na i Kim Jong-Un dia samy manana hahavom-pahefana mitera-doza izay na ireo Ray Mpanorina an'i Amerika, na i Marx sy Engels aza mety tsy ho nahavita naminavina azy.
Mahagaga ny mahita hoe tsy misisika intsony amin'ny fanoheran-dry zareo ny fanafihana amerikana ampiharina amin'i Korea Avartra ireo mpitondra ao Korea Atsimo sy Japàna. Ireo Koreana maherin'ny 70 taona dia mahatsiaro amin'ny antsipirihany an-tsary ny zera baomba namàfa an'i Pyongyang, ary mahafantatra fa hatezerana mitovy amin'izany no ho entin'ny tafik'i Kim Jong hamafàna an'i Seoul. Ny toerana misy an'i Japàna indray dia mijanona toy ny taloha hatramin'ny niakaran'ny Praiminisitra Abe ho eo amin'ny fitondràna. Tamin'ny filazàna fanohanana tsy misy fepetra ny politika ivelany arahan'i Trump, imbetsaka i Abe no nanambara fa ato ho ato i Japàna dia mety hanova ny lalàm-panorenany hamelàna ny tafika ao aminy “hiaro ny firenena”— fivoaran-draharaha iza tsy isalasalàna fa mety hanozongozona bebe kokoa ny ao Azia Atsinanana. Raha tokony hikatsaka fahatakarana ny lasa eo amin'izy samy izy, fomba fijery mankamin'ny fanavaozana momba ny Ady Lehibe Faharoa no nasesik'i Abe sy ny tarika tia tanindrazana mpahay tantara miaraka aminy, izay mandà ny fisian'ireo nantsoina hoe “vehivavy fampiononana” ary manamaivana ny asan'ireo Koreana 600.000 niaina tanaty fepetra feno hetraketraka. Raha ny marina, na any Korea Avaratra na any Atsimo, hatry ny ela ireo politisiana no nahatsapa ho notsiratsirain'ny tsy fisian'ny fahamatorana sy fivalozan'ny governamanta Japoney.
Izay rehetra firenena mihevitra fanafihana iray hatao amin'i Korea Avaratra dia tsy maintsy miatrika ny fanontaniana hoe ‘iza no namadika an'i RPDC ho lasa faritra faikany sy mania tahaka izao. Toy ny hoe ny fitondràna Kim Jong-Un ihany ho anjeràna ny fantsy ho niteraka ny tsy mety rehetra eo amin'ilay firenena, taompolo telo niainana fanjanahana feno herisetra nataon'i Japàna sy fandarohana baomba an'i Korea Avaratra — izay nihoatra lavitra noho ny faharavana nianjady tamin'ireo tanàna Alemàna na Japoney nandritra ny Ady Lehibe Faharoa — mitondra ampahan'andraikitra tamin'ny fananganana ity fitondràna miaramila mpanao an-dolompo ity.
Mitaky fandinihantena sy fomba fisainana manaraka ny tena fandehan-javatra ny famahàna olana nokleary. Raha hiverenana ny taompolo vitsy tany aloha, tsy sarotra ny mahita ohatra maro aminà mpitondra firenena izay nanana fahasahiana tsy niditra tamin'ny fampiasàna daroka baomba mba hisorohana ny faharavàna. Nisongadina ny filoha Reagan sy ny Sekretera Jeneraly Gorbachev, izay namaly tamim-pisainana sy fahamalinana ny mety hisehoan'ny fandringanana ateraky ny nokleary, tamin'ny nihaonan-dry zareo mba handinika ny fifandirana politika sy stratejika nisy taminy, nandritra ilay Vovonana tao Reykjavík tamin'ny 1986, izay nitondra ho amin'ny fidinan'ny maripàna sy fifanenjànana.
Ny fanompoana ny firenena dia afaka ihany koa hidika hoe fidirana aminà adihevitra iarahana amin'ireo olompirenen'ny firenena tsirairay avy, ary eo amin'ny tsirairay dia misy mandrakariva ny fanantenàna fanasitranana sy fiovàna. Noho izany, nahoana no tsy ho azo tanterahana ny hanova ny fifandraisana misy amin'ireo firenena mifanolàna?